Miaraka amin'ny 80% -n'ny vahoaka voan'ny tsindrona vaksiny tanteraka, i Singapour no firenena be vaksiny indrindra manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Singaporeana » Miaraka amin'ny 80% -n'ny vahoaka voan'ny tsindrona vaksiny tanteraka, i Singapour no firenena be vaksiny indrindra manerantany
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fanatrarana an'io tsangambato io dia mametraka ny dingana ho fanamaivanana bebe kokoa ny sisintanin'ny COVID-19 any Singapore.
80% n'ny mponina ao Singapour no voatsindrona fiarovana tanteraka.
Singapore hanamaivanana ny fameperana mifandraika amin'ny valanaretina COVI 19.
Mahazo mandeha mivezivezy indray ny olom-pirenena sy ny mponina ao Singapore.
Singapore no lasa firenena fanaovana vaksiny betsaka indrindra eran-tany, miaraka amin'ny 80% amin'ireo olona 5.7 tapitrisa ao aminy novolavola tanteraka hanoherana ny COVID-19, hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny fanjakana-nosy.
Ny minisitry ny fahasalamana any Singapour Ong Ye Kung
“Niampita dingana lehibe hafa isika, izay 80% amin'ny mponintsika no nahazo doka roa feno,” hoy i Singapore Minisitry ny fahasalamana Ong Ye Kung dia nilaza tamin'ny lahatsoratra Facebook omaly.
“Midika izany Singapore nanao dingana hafa handrosoana amin'ny fampandehanana ny tenantsika ho matanjaka kokoa amin'ny COVID-19. ”
Ny fampandrosoana dia manome ny tanàna kely fanjakana ny taha ambony indrindra amin'ny vaksiny feno.
Ny firenena hafa izay manana taha ambony amin'ny vaksiny dia misy ny Emira Arabo Mitambatra, Orogoay ary Silia, izay nanangona tanteraka ny 70 isan-jaton'ny mponina ao aminy.
Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra dia hiverina indray ny fivoriana lehibe toy ny fanisana ny Taom-baovao ary «hanana antoka ny orinasa fa tsy hikorontana ny asany».
Avela hivezivezy indray koa ny Singaporeana, farafaharatsiny mankany amin'ireo firenena izay nifehy ny virus ihany koa.
Singapore, izay nanomboka ny fampielezana vaksiny ny volana janoary, dia niantehitra betsaka tamin'ny jabs novolavolain'i Pfizer-BioNTech sy Moderna.
Singapore dia nahatratra 67,171 ny tranga ary 55 no maty hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.